Guddoomiyihii hore ee Bangiga Dhexe, Yusur Abraar oo Muqdisho Soo Gaartay – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyihii hore ee Bangiga Dhexe, Yusur Abraar oo Muqdisho Soo Gaartay
Guddoomiyihii hore ee Bangiga Dhexe ee Somalia, Yusur Aadan Abraar ayaa la sheegayaa inay soo gaartay magaaladda Muqdisho, kadib markii ay Madaxda Dowladda cusub u yeereen, si loogu dhiibo Xil Qaran.
Ilo-wareedyo ku dhow Xafiiska Ra’isul-wasaaraha ayaa sheegayo in Yusur Abraar safka hore kaga jirto Mas’uuliyiinta Xilalka Qaranka loo dhiibi doono, balse ma kala cadda in loo magacaabi doono Xil Wasiir ama xilal kale.
Warar Loo-qaateen ah ayaa muujinaya in loo magacaabi doono xilka Wasiirka Maaliyadda ama Qorsheynta Qaranka, inkastoo ay dhici karto in dib loogu magacaabo Guddoomiyaha Bangiga Dhexe iyo Madaxa Guddiga Qaranka ee La-dagaalanka Musuqa Xilka Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Somalia ayaa loo magacaabay Bishii September 13-dii ee sannadkii 2013-kii, balse kuma aysan raagin Xilkaasi oo waa ay iska casishay bishii October 30-dii ee isla sannadkaasi.
Inkastoo ay 7 isbuuc oo keliya ahayd Guddoomiyaha Bangigaasi, haddana waxay Warbixinteeda soo jiidatay Indhaha Caalamka, gaar ahaan Dowladaha Deeq-bixiyayaasha ee hal irmaan u ahayd Dowladda Federalka Somalia, kuwaasi oo su’aal geliyey Hufnaanta Loogu deeqo Dowladda Federalka Somalia.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku guda jira wada tashiyadii u dambeeyay ee uu ku soo magacaabayo Golihiisa Wasiirada, waxaana durbaba suuqa soo galay shaqsiyaad dhowr ah oo loo wado xilal Wasiiro ah.
Si kastaba ha ahaatee, Imaanshaha Yusur Aadan Abraar ayaa u muuqata Tallaabo uu Madaxweyne Farmaajo ku doonayo inuu ku xoojiyo La-dagaalankiisa Musuqa.
Ra’iisal Wasaare Kheyre oo la filaayo maanta inuu safar ku tago Magaalada Baydhabo
Jawaari oo la kulmay Xildhibaanada Dhalinyarada ee ku jira Baarlamaanka.